About Us - Ningbo Sine andriamby Co., Ltd
Ningbo Sine andriamby Co., Ltd, dia orinasa matihanina nanao raharaham-Neodymium lasibatry (NdFeB), Alnico avoakan'ireo andriamby, samarium Cobalt lasibatry (SmCo), ferrite lasibatry (Ceramic lasibatry) sy ny andriamby fiangonana tao Ningbo, Sina. Tsy manome kilasy voalohany andriamby vokatra maharitra.
Manana tanora saina sy ny tsy hanome ny Fanahy, manao ny zavatra rehetra, ary ho zava-dehibe tsara. Ataontsika ny ezaka rehetra ho sahan'andriamby taona maro miaraka amin'ny 'fahalalana sy ny traikefa. Nanjary mafy izahay, ary-kijanona nandritra ny 10 taona ka hiaro mandroso eo.
Quality dia ny ain'ny vokatra sy ny fiainan'ny orinasa. Tsy tapaka isika mampiofana ny mpiasa mba hahatonga azy ireo ho tsara mifehy ny fahaiza-manao. Hentitra isika hanatanteraka ny hatsaran'ny Management System: ISO9001: 2008, ISO / TS16949: 2009, sy ISO14001: 2004.Advanced famokarana sy fitaovana fitiliana antoka ny vokatra avo avo tsy tapaka sy ny fahamarinan-toerana. Indrindra ny fitaovana dia nandroso avy any Alemaina sy ny Japana, toy ny hoe: ICP, efa efi-trano, sns Laser sombiny Analyzer lasibatry ny manaraka ny fepetra ny taona, RoHS, SGS sy Vokatr'izay toromarika.
Ny fomba amam-panao indrindra avoakan'ireo andriamby, dia atao araka ny fangatahana, sy ny takian'ny fampiharana ny mpanjifa. Misy isan-karazany ny Andriamby azo namboarina ny fitaovana isan-karazany, kilasy, coating, endrika, halebeazana, magnetization tari-dalana, be, sns avoakan'ireo andriamby, Afaka manome ny endriny isan-karazany toy ny kapila producible, peratra, mahitsi-, goba, fisotroana, varingarina, kapila tanimanga, ampahany , lamination, sehatra ary ny sasany tsy manam-paharoa hafa ny endriny. Ankoatra izany, dia efa efa-bahoaka soa aman-tsara vokatra maharitra lasibatry ny naoty ambony indrindra fampisehoana N54,52M, 50H, 48SH, 45UH, 42EH sy 38AH.
Efa tratra mahavokatra vokatra na isika izao eo amin'ny fitomboana ho an'ny sehatra iraisam-pirenena tsena. Efa miorina tsara ny raharaham-barotra maneran-tany fifandraisana amin'ny mpanjifa. Mino isika fa isika no ho mpiara-miasa raharaham-barotra tsara indrindra ho ela. Mety hanome anao ny tsara indrindra vokatra tsara amin'ny vidiny mora indrindra sy ny tsara indrindra fanompoana. Mijoroa mijoalajoala toy ny Refaita teo amin'ny atsinanana, manidina-kalalahana ao amin'ny lanitra midadasika. Sine dia handroso tsy tapaka mba ho mpiara-miasa tsara indrindra sy ny faladian'ny internationalization paikady.
Izahay miarahaba anareo tonga soa hifandray aminay raha manana fanontaniana momba ny orinasa sy ny vokatra. Miezaka isika ny hampahafantatra, hanabe sy hanome ny tsara indrindra vokatra sy ny tolotra misy.
Miandrandra ny fanorenana fifandraisana amin'ny raharaham-barotra ny orinasa kaja.